﻿ ​निरोगी रहन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
​निरोगी रहन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
शरीरलाई रोगबाट बचाइराख्नका लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यी खाद्यपदार्थ जुन रातमा सुत्नुअघि खानाले निरोगी बन्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ :
दूध मानव शरीरका लागि स्वस्थकर मानिन्छ । तर, बेलुकीको खानामा दूध पनि सँगै प्रयोग गर्दा यसको प्रभावकारिता थप बढ्ने गर्दछ । यसको प्रयोगले शरीरलाई आवश्यक बोसो त प्रदान गर्छ नै, आरामदायी निद्राका लागि पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । त्यसैले बेलुकीको समय नियमित दूध प्रयोग गर्दा पनि निरोगी रहनका लागि सहयोग मिल्छ ।
कतिपयले बेलुकासमेत मासुको प्रयोग गर्ने गर्छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । बेलुकीको समय नियमित हरियो तरकारीको प्रयोगले निरोगी रहन मद्दत गर्दछ । अचार र सलादका रूपमा पनि हरियो तरकारी वा फलफूल प्रयोग गरेर शरीरलाई निरोगी राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा पनि पाचन प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्छ ।